AmaNevado ama-5 abaluleke kakhulu ePeru | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | América, Izindawo zokuvakasha, Yini ongayibona
Umhlaba unezindawo ezinhle kakhulu futhi uma sicabanga ukuthi zakhiwa kanjani, phakathi namakhulu eminyaka, ngokunyakaza okungazelelwe nokubulalayo koqweqwe namapuleti etektoni, kumangalisa ngokwedlulele.
La ICordillera de los Andes ingesinye sezintaba ezihlaba umxhwele kakhulu emhlabeni futhi ebanzi kakhulu ngaleso sikhathi weqa iphrofayili yamazwe amaningana aseNingizimu Melika ekuvukeni kwayo. Elinye lalawa mazwe yiPeru nezintaba zalo ezineqhwa laphakade seziyindawo yabavakashi yokuhamba izintaba okuhle kakhulu. Ake sazi ifayela le- izintaba ezineqhwa lasePeru.
Izintaba i-Andes zichaza uhlangothi olulodwa lweColombia, ingxenye yeVenezuela, i-Ecuador, iBolivia, iPeru, iChile ne-Argentina. Ukuphakama okuphakathi kwezintaba zayo kungamamitha ayizinkulungwane ezine kodwa I-Aconcagua, isiqongo sayo esiphakeme kunazo zonke, enhlabathini yase-Argentina, ifinyelela kumamitha angama-6960 wokuphakama ngakho-ke iyamlandela iye eHimalaya.
Singasho ukuthi i-Andes ilaphahla kweMelika futhi besingeke sibe nephutha. Ngaphezu kwalokho, futhi kusindisa izintaba-mlilo endaweni ephakeme kakhulu eMhlabeni futhi uhamba ingqikithi yamakhilomitha angama-7240. Lapho iqeda uhambo lwayo olude olungasemngceleni woLwandlekazi iPacific, icwila emanzini aseSouth Atlantic, ekuphakameni kwe-Isla de los Estados, kuthi ngakolunye uhlangothi, icishe ifinyelele oLwandle lweCaribbean.
Izazi zokwakheka komhlaba zithi lolu hambo lwezintaba zaseMelika yakhiwa ngokuhambisa ipuleti leNazca ngaphansi kwepuleti laseNingizimu Melika, ngasekupheleni kweLate Cretaceous noma Upper Cretaceous, inkathi yokugcina ye-Cretaceous Period eyaphela eminyakeni eyizigidi ezingama-66 edlule. Kwakuwukunyakaza okungaphansi ngakho-ke umphumela ukuthi kukhona umsebenzi wentaba-mlilo ngobude bayo.
Izintaba ezibizwa ngeqhwa zasePeru zitholakala eCentral Andes, umkhakha ofaka i-Andes yaseBolivia, i-Argentina, iChile nePeru. I-Inca eqanjwe ngegama U-Apus eziqongweni ezineqhwa laphakade futhi yibo asebephenduke baba ukukhweza izintaba, ukuhamba ngezinyawo nokuzidela.
1 UNevado Huascarán
2 INevado de Alpamayo
3 UNevado Huaytapallana
4 UNevado de Huandoy
5 USnowy Huantsan
Le massif enesigqoko seqhwa usemnyangweni we-Ancash, EPeru Ephakathi. Kuphakeme kakhulu ngaleso sikhathi ingamamitha angama-6768 ubude futhi inenani eliphelele izingqungquthela ezintathu ngomehluko omncane wokuphakama phakathi kwabo. Ubuningi begwadle obumbozwe umhlaba, izimila neqhwa kwakhiwa eminyakeni engaphezu kwezigidi ezinhlanu edlule.
Kuyintaba yesihlanu ephakeme kunazo zonke eMelika Futhi njengoba konke kuyindaba yokubuka, uma ukuphakama okusuka enkabeni yomhlaba bekukalwa, bekungaba intaba yesibili ephakeme kunazo zonke emhlabeni, okungukuthi, cishe cishe amakhilomitha amabili ngaphezu kweNtaba i-Everest.
Izigodi ezimbili ezijulile ziyalihlukanisa nobubanzi bezintaba, imihosha njengoba ibizwa lapha. Emfudlaneni wokuqala kutholakala i- Ipaki kazwelonke i-huascaran, ngamachibi ayo kanye namathafa wokuvakasha. Owesibili awudumile kangako kepha yingakho ungenabo ubuhle noma amarekhodi: Inomhubhe wemoto ophakeme kunayo yonke emhlabeni: 4732 amamitha.
Ngenkathi enye yeziqongo wakhuphukela phezulu ngo-1908, futhi kwenziwa ngowesifazane waseMelika, u-Annie Peck, ezinye iziqongo zazizothola ukuvakashelwa kowesilisa ngo-1932. iyi-World Heritage Site kusukela ngo-1985, njengendawo yokugcina izinto eziphilayo ze-Biosphere ngenxa yamachibi ayo nezinguzunga zeqhwa, ezibalelwa cishe kumashumi amathathu.
INevado de Alpamayo
Le ngenye intaba ngaphakathi komnyango ofanayo wase-Peru wase-Ancash. Kukala amamitha ayi-5947 wobude futhi kuyinhlanganisela yeqhwa nedwala lokho kochwepheshe abaningi abaphethe isihloko se la Intaba enhle kakhulu emhlabeni.
Kubukeka njengephiramidi yokuphelela okukhulu futhi yize kungelona ulwandle oluphakeme luhle kangangokuba imininingwane iyakhohlwa ngokushesha. Idolobha eliseduzane ukuqala i-adventure yokwazi le ntaba yasePeruvia ngamakhilomitha angama-467 ukusuka eLima futhi yiCaraz.
Indoda yaseNtshonalanga, asisoze sazi ukuthi kukhona yini umuntu owahamba ibanga elide kangaka ngaphambili, wafinyelela esicongweni ngeminyaka yama-30s yekhulu lamashumi amabili. Namuhla umzila ojwayelekile wokufinyelela esiqongweni yilowo ovulwe yiqembu labaqali bezintaba base-Italy eminyakeni engamashumi amane eyedlule, ngaseningizimu mpumalanga. Akulula futhi ngokusho abakushoyo, kubukeka njengezintaba zeHimalaya.
Le ntaba eboshwe iqhwa itholakala kusukela ngo-2001 iyindawo evikelekile ngaphakathi komnyango wasePeruvia waseJunín. Ineziqongo eziningana futhi ephakeme kakhulu ingamamitha angama-5557 ukuphakama kanti owesibili ungaphansi nje kwamamitha angama-5530. Kamuva, kunezelwa iziqongo eziningi zokuphakama, onke angaphezulu kwamamitha ayizinkulungwane ezinhlanu. Yeka ubukhazikhazi!
Singayichaza njengebanga lezintaba elincane elitholakala amahora amabili kuphela ngemoto ukusuka edolobheni laseHuancayo, bese kuthi amahora ayisishiyagalombili ukusuka eLima. Ikamu eliyisisekelo lokukhuphuka ngamamitha ayizinkulungwane ezine ukuphakama futhi ukusuka lapho abagibeli bangalandela imizila emibili.
UNevado de Huandoy
Le ntaba iyatholakala nasemnyangweni we-Ancash futhi ulinganisa amamitha angama-6395 wokuphakama. Phezulu lapho phakathi kwamafu neqhwa bacasha iziqongo ezine likhithika. Itholakala enyakatho neHuascarán eneqhwa futhi abagibeli bezintaba bafika besuka esigodini noma emfuleni weLlanganuco.
Kungaphakathi komkhakha owaziwa ngeCordillera Blanca, uhla lwezintaba zeziqongo ezimbozwe yiqhwa ezigudla ugu olusentshonalanga yePeru cishe amakhilomitha angama-180 futhi ngaphakathi kwalo, njengengcebo, kunezinguzunga zeqhwa ezingaphezu kwamakhulu ayisithupha, iziqongo eziningi ezigqitshwe yiqhwa futhi eziningi zingaphezu kwamamitha amahlanu ukuphakama, amakhulu amachibi kanye nemifula eminingi.
Futhi kungenye yeziqongo ezigoqwe yiqhwa ze- UCordillera Blanca. Ineziqongo ezine, eziphakeme kakhulu zifinyelela kuzo Amamitha ayi-6369 ukuphakama kulandelwe eduze ezinye ezintathu. Abagibeli bezintaba abakhuthazwa yileli qhwa leqhwa bayazi ukuthi banomsebenzi onzima kakhulu nokuthi kudinga inqubo eningi, kangangoba kwaba ngama-50s kuphela lapho ukunqoba kungafunwa khona.
Izivakashi zifika kule ntaba eneqhwa ePeru zivela edolobheni laseHuaraz, phansi kwentaba, futhi kwenziwa ukuvakasha okuningi ngaphezu kohambo lwezintaba. Ungakwazi ukwenza isibonelo uhambo lwebhayisikili lezintaba usuku lonke oluthatha ukuthi wazi iRajucolta Creek nedike layo kanye nokuphakama kwamamitha ayizinkulungwane ezine. Uma ufuna ukungena epaki kuzwelonke kufanele ukhokhe.
Iqiniso ukuthi lezi ngezinye nje zezintaba ezibizwa ngeqhwa zasePeru. Kunezintaba eziningi zeqhwa laphakade ePeru, yize kuyiqiniso ukuthi okuhle kakhulu kubonakala kugxilwe emnyangweni we-Ancash.
Uma uthanda imidlalo yezintaba futhi udinga lowo mbono wezwe ongafinyelelwa kuphela phezulu kwesinye, iPeru ikulindile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Yini ongayibona » INevados yasePeru
Hhayi-ke ngingathini, e-peru yethu kunezindawo ezinhle zemvelo zokukwazi ukwazi….
diego leandro kusho
Kuyinto enhle kakhulu ngenxa yokuthi ngikwazile ukwenza umsebenzi wami wesikole waseholidini .. Diego leandro el Cuero
Phendula ku-diego leandro
izimangaliso ezinkulu izwe lethu elinazo zihlaba umxhwele kakhulu kuzo zonke izindawo ezimbozwe yiqhwa e-peru
Kuhle kakhulu futhi ngenxa yalokho ngikwazile ukuzinika ibanga elihle esikoleni sami
angie shteffany ruiz mejia kusho
Ngifuna ukukutshela ukuthi ngenxa yabo sonke singathola futhi senze umsebenzi wethu wesikole kahle futhi kubaluleke kakhulu ukwazi ngazo zonke izintaba ezibalulekile ezimbozwe iqhwa ePeru, ngiyabonga kakhulu !!!!
Phendula u-angie shteffany ruiz mejia
IPeru inezintaba ezinhle kakhulu ezibozwe iqhwa, yize ngingaveli lapho, zibukeka zizinhle kakhulu.
Ikhasi elihle, ngithanda ukwazi ukuthi unemithambeka yokushushuluza ezindaweni noma okungenani uma ingeyesikhashana
Izintaba zasePeru ezigcwele iqhwa zithandwa kakhulu ezindaweni zokuphila, zingami endaweni yesikhulumi seqhwa noma iqhwa, yindlela abantu basePeru nomhlaba wonke abakwazisa ngayo lokhu. Kuyabonakala ukuthi abalazi ichweba lase-willcacocha e-Ancash noma iSwitzerland yaseCusco neNevado Wacaywillque namachibi ayo asePiuray naseHuaypo. Leyo yindlela yokubonga, ukunakekela nokugcina izintaba zethu ezineqhwa.